सामाजिक सञ्जाल र सक्रिय संचार को एक प्रशंसक, त्यसपछि पक्कै पनि कम से कम एक पटक जान कसरी छक्क परे - यदि तपाईं को "संपर्क", गर्न भने अस्वीकार पहुँच। किन आफ्नो खाता रोकिएको छ यस लेखमा हामी तपाईंलाई भन्नेछु, र कसरी यो अवस्थामा हुन।
प्रोफाइल गर्न अवरोध / चिसो र मना पहुँचका लागि मुख्य कारण
भाइरस को उपस्थिति। यो निम्न तरिकामा प्रकट भएको छ: तपाईं साइटमा पृष्ठमा जानुहोस् र यसलाई भंग बारेमा एउटा सन्देश हेर्न र एसएमएस पठाएर पहुँच पुनर्स्थापना गर्न प्रस्ताव। म यस्तो रिपोर्ट बेवास्ता गर्नु हुँदैन चेतावनी चाहन्छ। निःशुल्क साइट "VKontakte" को प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो खाता बाँधिएको जो मोबाइल नम्बर एक पासवर्ड साइट को प्रशासन आगमन सन्देशहरू स्वीकार र कहिले लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
काल्पनिक पृष्ठ। यो फेरि ठगाहाहरू को चाल हो। तपाईं प्रविष्ट गर्दा एक वेबसाइट ठेगाना ब्राउजर तपाइँको जस्तै देखिन्छ कि अर्को पृष्ठमा तपाईं पुन: निर्देशित। बाह्य वास्तविक र काल्पनिक प्रोफाइल गाह्रो छ भेद, तिनीहरूले धेरै समान छन्। यी पृष्ठहरू प्रयोगकर्ता आईडी र पासवर्ड लोभ्याउन गर्न सिर्जना गरिन्छ।
स्पैमिंग। अन्य प्रयोगकर्ताहरू पठाइएको धेरै दोहोरिने सन्देशहरू लागि, तपाईंको खाता रोकिएको छ।
छोटो अवधि भित्र धेरै समूहहरू, सार्वजनिक, सामुदायिक प्रवेश।
गलत प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड।
प्रतिबन्ध कार्यस्थल लगाएको।
हामी पहुँच अस्वीकार यदि "संपर्क" जान कसरी व्याख्या तल
म पहुँच प्राप्त गर्न के गर्न आवश्यक छ?
हामी अब माथि वर्णन परिस्थितिमा व्यवहार कसरी विचार गर्नुहोस्। कसरी "संपर्क" जान पहुँच अस्वीकार भने?
कम्प्युटर मा भाइरस को उपस्थिति मा, तपाईं यसलाई हटाउन पर्छ। यो एन्टी-भाइरस र मद्दत संग गर्न सकिन्छ निको उपकरण। आफ्नो कम्प्युटरमा वर्तमान रक्षक एक जासूस कार्यक्रम नोटिस गर्नुभएन भने, यसलाई डाउनलोड र अर्को स्थापना गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
के तपाईं ब्राउजरले एक नक्कली पृष्ठमा तपाईं पुनः निर्देशित छ याद भने, यो तपाईंको ब्राउजरमा क्यास स्मृति खाली र भाइरस लागि आफ्नो कम्प्युटर स्क्यान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तपाईं अन्य साइटहरु पहुँच कि, तपाईं बस हुन सक्छ जाँच अनलाइन काम गरिरहेको छैन। यदि अन्य स्रोतहरू खोलिएका छन्, यो आफ्नो ब्राउजर सेटिङ हेर्न वा आफ्नो ISP सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।
स्थिति मा, यदि तपाईं ई-मेल गर्न छैन, र यो तपाईंको डाटा fraudsters सञ्चालन गर्दै मुनि, तुरुन्तै पासवर्ड परिवर्तन गर्ने आशङ्का गरिएको छ।
समूह मा प्रवेश संग यो ज्यादा छैन, यो खुराक मा गर्न राम्रो छ।
कसरी "आयोग" जान पहुँच एक पासवर्ड कारण बन्द छ भने? लिङ्क प्रयोग "आफ्नो पासवर्ड भूल"। तपाईं पेज तोकिएको तपाईँको मोबाइल फोन नम्बर मा, एउटा रिमाइन्डर सन्देश जानेछ।
कसरी "संपर्क" पहुँच काम बन्द गरिएको छ भने जान? वेबसाइट खोल्ने आफ्नो नेतृत्वको कुरा वा CGI प्रोक्सीहरूको, जो तपाईं पहुँच अवरुद्ध छ के हेर्न अनुमति दिन्छ प्रयोग गर्नुहोस्।
यी साइट को मुख्य सिफारिसहरू छन्। हामी आशा यो लेख पढ्ने पछि, तपाईंले भने अस्वीकार पहुँच गो गर्न "संपर्क" स्पष्ट हुनेछ कि।
साइट संवर्धन Trafficgen.ru मा
कसरी प्लगइन संग र बिना Wordpress संग च्याट साइट बनाउन
भौतिक मोन्टेस्वरी हात हुन्छ। मोन्टेस्वरी सामाग्री
Anjelica Huston: को inimitable Femme fatale गर्न "retarded बच्चा Prodigy" को बाटो
13 वटा क्रियाकलापहरू जुन तपाईले तपाइँको नाखून संग गर्नु हुँदैन
के कागजातहरू एउटा पासपोर्ट प्राप्त गर्न आवश्यक छ, वा समय कसरी सुरक्षित गर्न।
Verdi Zippy "3 मा 1" स्ट्रोलर: विवरण, फोटो, समीक्षाहरू
बागवानी रहस्य: गिरावट मा प्रत्यारोपण peonies
पुरुषहरूको लागि "स्वाद": समीक्षा र वर्णन
शैली र रुचि को नियम: को पोशाक को neckline एउटा सजावट कसरी छनोट गर्न
Emergencies को वर्गीकरण